Ny Semalt Expert dia manome fomba fiasa an-telefaona hanodinana ny fanamarinana sy ny fifamoivoizana
Azo inoana fa nanao sonia ny sehatr'asa Google Analytics ianao ary nahita ny darodar.com, catches, ary ny hafa tsy azo lavina amin'ny tatitra fanolorana anao. Na, etsy an-kilany, hitanao ny tsindry mirevaka amin'ny fihetsiketsehana mandrindra.
Nanazava i Oliver King, mpitantana ny Success Successor avy amin'ny Semalt , hoe nahoana no zava-dehibe ny fanivànana spam.
Misy karazana spam roa izay mikorontana ao amin'ny sehatra fitadiavanao.
Voalohany, ny botsika tsy mahavita mitsidika ny tranonkala - report writer software for mysql. Miantso azy ireo ho "bôsin-doza aho". Ireo botsaka ireo dia spam tsy misy lozam-pifamoivoizana ao amin'ny vina tsy voamarina amin'ny mailaka mailaka, spam fanamarihana, ary ny flyers eo ambany fiarànan'ny fiaranao.
Faharoa, ny botsika izay mametraka ny tranokalanao. Nolazaiko azy ireo ho "botsingin'ny zombie", izay mamorona spam amin'ny ankapobeny noho ny antony samihafa.
Iza no manatanteraka izany ary nahoana no mitranga izany?
Ny bota fanahy dia zavatra iray izay manararaotra ny fomba maivana malalaka alohan'ny vondron'olona.
Zana-bota simika tsy ampy na tsy misy fotony. Botsa rehefa lehibe ny fisalasalana ary ampahany amin'ny rafitry ny tranonkala..
Tsy misy valiny feno ho an'ny botsaka rehetra (raha tsy misy ny fanampian'i Google), nefa misy zavatra roa azonao atao mba hanatsarana ny fanadihadiana.
Misy fitarihana mahatsiravina goavana manodidina ity olana ity. Ny fampiasana ny fanilihana an-tsehatra eo ambanin'ny fananana dia tsy aseho amin'ny fantsona spam raha jerena ny hoe:
Tsy fandaminana tanteraka izany.
Tsy tena mazava tsara izany.
Afaka manosika ny fitsidihana amin'ny fitsidihana iray (tsy misy) / Coordinate fotsiny izy io.
Tsy manome fahafahana anao hanara-maso ny zava-misy diso amin'ny fampahalalana azo antoka.
Misy toerana maro (manisa olona azo itokisana) izay manolotra fiovana amin'ny servisy manokana, ohatra,. Toy izany koa ny eritreritra mahatsiravina.
Farany, ny kaonty Google Analytics amin'ny "Channel Known Bots and Bugs" dia tsy mifanohitra amin'ny ghost sy zombie bots.
Ireo mpitsidika Ghost dia sessions hita tao amin'ilay fandinihana izay tsy mbola nisy na oviana na oviana. Ny bot tsy nangataka ny antontan-taratasy rehetra avy amin'ny rafitrao. Nampiely izay fampahalalana rehetra ilainy mba handefasana mivantana amin'ny sehatra Google Analytics anao amin'ny alàlan'ny famaranana ny mari-panadinana amin'ny code code UA.
Zana-bolo maro no manome alalana anao satria izy ireo dia mametraka sy mametraka ny tranonkalanao. Amin'ny fotoana tsy ahafahanao mijery fandaharana amin'ny serivisy, ity fampiharana fampianarana nataon'i InMotion Hostingsolid ity. Ny fanelingelenana azy ireo amin'ny rafitrao dia tsy manampy fotsiny ny fanadiovana ho an'ny fanadihadihana ataonao, fa mety hampihena ny petrabola eo amin'ny fananan-tsainao ihany koa.
Mandra-pahavitan'ny monimitatra fandaharana iray hafa, dia voafetra ny fantsona ahafahana mivezivezy amin'ny ankamaroan'ny fihetsiketsehana tsy misy soritr'aretina.